प्रतिनिधिसभा सदस्य, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
० संविधान संशोधनको सन्दर्भमा अहिले के हुँदैछ ?
— संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डबीच जुन सहमति भएको छ, त्यसअनुसार छलफल भइरहेको छ । निकट भविष्यमै संशोधनबारे सबैले थाहा पाउनेछन् ।
० संशोधन विधेयक कहिलेसम्म संसदमा प्रस्तुत हुन्छ ?
— संशोधन विधेयक कहिले संसदमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुराको ठ्याक्कै मिति भन्न सकिँदैन तर हाम्रो दबाब छ कि चाँडोभन्दा चाँडो होस् । किनभने संशोधन हाम्रो प्रमुख माग हो । हामी सत्तापक्ष भएर सत्ता चलाउन लालायित भएका होइनौं । केपी ओली र प्रचण्डको पनि वक्तव्य आउँदैछ कि संविधान संशोधन गर्छौं भनेर । अर्कोतिर हाम्रो दबाब त जारी नै छ ।
० तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्छौं भनेर भन्दै आउनुभएको छ । उहाँलाई संशोधनको आवश्यक्ता र औचित्य किन महसुस भइरहेको छैन ?
— उहाँहरूले त संविधान जारी भएदेखि नै संविधानका एक शब्द पनि हटाउँदैनौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर अहिलेको अवस्थामा संशोधन गर्न तयार हुनु भएको छ । आवश्यक्ता नै आविष्कारको जननी हो भनिन्छ । जब केही चीजको आवश्यक्ता हुन्छ अनि आविष्कार हुन्छ । हामी पटकपटक भन्दै आएका छौं कि पाएका उपलब्धिलाई रक्षा गरौं र पाउन बाँकी रहेका मुद्दाका लागि संघर्ष जारी राखौं । विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीको जुन बोली थियो त्यसमा धेरै परिवर्तन आएको छ । उहाँ अहिले संघीय नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कुनै पार्टीका नेता मात्र हुनुहुन्न । त्यसैले उहाँले हामीसँग जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ । हामीले आश्वासन वा मौखिक प्रतिबद्धताको आधारमा सरकारमा गएका होइनौं, लिखित सहमति गरेका छौं ।
० यस्ता लिखित सहमतिहरू फोरमले विगतमा पनि गरेको हो, खोइ त पूरा भएको ?
— यसपटक हामी विश्वास गर्नैपर्छ । किनभने अहिलेको सरकारसँग पूर्ण बहुमत छ । यदि सहमतिअनुसार संशोधन भएन भने हामी पनि बाध्य भएर अर्को बाटो रोज्न सक्छौं । तर, त्यस्तो दिन आउँदैन भन्ने विश्वास गरौं । हाम्रा थुप्रै मागहरू छन्, कतिपय माग अहिले पूरा भएको हो, कतिपय विस्तारै समय परिस्थिति अनुसार हुँदैजान्छ ।
० पूर्ण बहुमतको सरकारले तपाइँहरूले भनेअनुसारको संशोधन गर्छ त ?
— हामी विश्वस्त छौं कि निकट भविष्यमै संशोधन हुन्छ ।
० तपाइँहरूको मुख्य मागमध्ये सीमांकन हेरफेर गर्न सजिलो छ ?
— प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्दा सबै प्रदेशको सहमति हुनुपर्ने जुन प्रावधान छ, संविधानबाट त्यसलाई नै पहिला हटाउनुपर्छ । यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जसलाई हामी परिवर्तन गर्न चाहेका छौं । यसका लागि व्यापक छलफल र आपसी समझदारी बन्नुपर्छ । हाम्रा मागहरू पूरा गराउन योभन्दा राम्रो परिस्थिति कहिल्यै पनि बन्दैन । किनकि अहिलेको सरकारसँग बहुमत पनि छ र प्रतिपक्षीले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
० संशोधनका विषयमा राजपासँग पनि छलफल भइरहेको छ ?
— संविधान संशोधनका विषयमा राजपासँग पनि छलफल भइरहेको छ । पहिला पनि हामीले संयुक्तरूपमै संशोधनका मुद्दाहरू बुझाएकै हो । संशोधनका विषयमा सरकारसँग कुरा हुँदा फोरमले राजपासँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।
० तपाइँहरू सरकारमा जाँदा राजपासँग छलफल गर्नुभएन भन्ने गुनासो छ नि ?
— एउटा कुरामा सबै स्पष्ट हुनु जरूरी छ कि हाम्रो सहकार्य र समन्वय प्रदेश २ मा थियो । राजपा छुट्टै पार्टी हो र फोरम पनि छुट्टै पार्टी हो । गठबन्धन बनाएर देशभरि चुनाव लडेका होइनौं । जहाँ हाम्रो गठबन्धन भएको छ, त्यहाँ हामी अहिले पनि सँगै छौं र जहाँ भएको छैन त्यहाँ दुवै स्वतन्त्र छन् । त्यसैले हामी सरकारमा जाँदा राजपाले गुनासो गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । सरकारमा सहभागी हुन राजपासँग पनि सरकारले छलफल गरेको थियो । तर, ६ वटा पार्टी मिलेर एउटा राजपा बनेको छ, त्यसमा पनि ६ वटा अध्यक्षहरू छन् । को सरकारमा जाने को नजाने भनेर कुरा नमिलेर होला, राजपा सरकारमा जान सकेन । उहाँहरूलाई जुनसुकै निर्णय गर्न धेरै समय लाग्छ तर, हाम्रो त्यस्तो समस्या छैन । हामीले दुई दिनमै संसदीय दलको नेता चयन ग¥यौं तर राजपाले अहिले भर्खर चयन गरेको हो । त्यसैले दुवै पार्टी छुट्टाछुट्टै भएकोले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय गर्न पाउँछन् । यसमा कोही रिसाउनु वा गुनासो गर्नुको कुनै तुक छैन ।
० तपाइँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ तर आन्दोलनका बेला राजबन्दी बनाइएकाहरूको रिहाई, झुठा मुद्दा फिर्ताबारे फोरमले केही बोलेको देखिँदैन न ?
— केही बोल्नुभन्दा गरेर देखाउनु राम्रो हो । राजपाले बाहिरबाट बोलिरहेको छ तर हामी भित्रबाट गरिरहेका छौं । अब हामी बोल्ने अवस्थामा छैनौं किनकि हामी सरकारमा छौं, हामीले गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष नै उपप्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएको छ, उहाँले प्रतिपक्षजस्तो भाषण गर्न मिल्दैन । उहाँले बोल्नुभन्दा पनि गरेर देखाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले राजबन्दीहरूको रिहाई र झुठा मुद्दा फिर्ता गराउँछ ।
० फरक प्रसंग, तपाइँले सञ्चालन गर्नु भएको निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग जोडिएर तपाइँ विरूद्ध विवादास्पद खबरहरू आएका छन्,के हो वास्तविकता ?
— हेर्नुस्, यो एउटा षड्यन्त्र हो । केही मिडियाहरू कहींबाट निर्देशित भएर, कसैको स्वार्थका लागि, कसैको दबाबमा म विरूद्ध यस्ता भ्रामक कुराहरू ल्याउने गरेका छन् । मिडियाको जुन धर्म हुन्छ त्यो पनि निर्वाह गरेको देखिँदैन । यदि म विरूद्ध कसैले कुनै जानकारी दिन्छ भने त्यो सत्य हो कि होइन भनेर सम्बन्धित पक्षसँग पनि एक पटक सोध्नुपर्ने हो । तर, एकपक्षीय ढंगले कसैको प्रभावमा यस्ता भ्रामक समाचारहरू आएको छ । कुनै ठेक्का वा आयोजनामा अनियमितता भएको छ भने त्यसमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ कि छैन, त्यो पप्पु कन्स्ट्रक्सनको ठेक्क हो कि होइन, पप्पु कन्स्ट्रक्सनमा हरिनारायण प्रसाद रौनियारको हैसियत के छ त, यस्ता कुराहरू नै नबुझेर अफवाह फैलाउने काम मात्र भएको छ । निर्माण पेशा यस्तो शुद्ध पेशा हो जुन कुनै इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट अथवा उद्योगसँग जोडिएको होइन । यो सिधा सरकार र विकाससँग जोडिएको हुन्छ । राज्यद्वारा छुट्याइएको रातो किताबको बजेटसँग जोडिएको हुन्छ । म वि.सं. २०४० सालदेखि २०७४ सालसम्म एउटा निर्माण व्यवसायी थिएँ । मैले संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा आबद्ध भएपछि किन मेरो बारेमा यस्ता कुराहरू आउन थाले, म आफै आश्चर्यचकित भएको छु । यो एउटा षड्यन्त्र नै हो ।
० भनेपछि तपाइँ फोरममा सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भएदेखि तपाइँमाथि प्रहार हुन थाल्यो ?
— म फोरममा आबद्ध भएपछि म कम्पनीको पद नै त्याग गरेँ । अहिलेको अवस्थामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग कहीं पनि मेरो कागजी लगाव छैन । ३४ वर्षसम्म म अध्यक्ष थिएँ, प्रबन्ध निर्देशक थिएँ । तर, मेरो राजनीतिक यात्रा सुरू भएको एक वर्ष पनि भएको छैन । यति दिनसम्म म पप्पु कन्स्ट्रक्सनमा हुँदा किन मिडियाले मेरो बारेमा केही ल्याएन, त्यतिबेलासम्म मलाई कसैले चिन्दैन्थ्यो । म फोरममा आबद्ध भएर, मैले आफ्नो जीवनमा सामाजिक कार्य गरेकोमा दिग्गज–दिग्गज नेताहरूलाई हराउँदै प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएँ । म सामाजिक कार्य गरेको हुनाले त्यहाँका जनताले मलाई ६ महिनाकै अवधिमा अत्याधिक मतले जिताएका छन् । मेरो जीतबाट स्वयम् पार्टी अध्यक्ष आश्चर्यचकित हुनुभएको थियो । मेरो जीत मिडियाका साथीहरूलाई अपच भयो कि ? कि मेरा प्रतिपक्षसँग मिलेर मलाई बदनाम गर्न लागेको हो कि ? म सांसद भएदेखि अहिलेसम्म मेरो कम्पनीले कुनै नयाँ ठेक्कपट्टा लिएको पनि छैन । पहिलाकै काम नै हामी गर्दैछौं । जुन ठेक्का हामीले गरेकै छैन त्यस्ता ठेक्काहरूबारे भ्रामक समाचारहरू षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले ल्याइँदैछ । कहीं कुनै पुल बनाएको छ र त्यो भत्केको छ भने त्यो पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नै बनाएको भन्ने कुराहरू आउँदैछ । जुन निर्माणमा हाम्रो कुनै संलग्नता नै छैन, त्यस्ता विषयमा मेरो नाम मुछिएर बदनाम गर्न खोजिँदैछ ।
नेपालमा अहिले १५ सय जति पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यसको लागत ६३ अर्ब रूपैयाँ हो र राज्यले प्रतिवर्ष जम्मा तीन अर्ब बजेट विनियोजन गर्छ । बजेटको अनुपातमा हेर्दा त यी सबै पुलहरू बनाउन करिब २१ वर्ष लाग्न सक्छ । म मिडियाका साथीहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि सरकारसँग सोध्दैन कि ५० करोडको पुलको ठेक्कदा गर्दा वर्षको मात्र दुई करोड विनियोजन गर्दा तीन वर्षमा निर्माण कार्य सकिन्छ त ? ५० करोडको पुल तीन वर्षमा बनाउन त वर्षमा करिब १५ देखि २० करोड रूपैयाँ बजेट त रातो किताबमा राख्नुपर्छ नि । अरू केही प्रमाण खोज्नुपर्दैन । यदि कुनै परियोजना ठेक्का लागेको छ भने त्यसको ठेक्का अवधि कहिले हो, समाप्त गर्ने कहिले हो र त्यसको बजेट रातो किताबमा कति छ हेर्दा सबै छर्लङ्ग हुन्छ ।